Artel ဗီဒီယိုစနစ်များအား Mike Rizzo အားသမ္မတအဖြစ်အမည်ပေးခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Artel ဗီဒီယိုစနစ်များအမည်များကိုသမ္မတအဖြစ်သူ Mike Rizzo
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များအမည်များကိုသမ္မတအဖြစ်သူ Mike Rizzo
အောင်မြင်သောမဟာဗျူဟာခေါင်းဆောင် Artel ရဲ့ကြီးထွားမှုအစီအစဉ်အရှိန်မြှင့်ရန် Added
WESTFORD, Mass - ။ မေလ 28, 2015 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏တစ်ဦးဝန်ထမ်းပိုင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO အဖြစ်က Mike Rizzo ၏ရက်ချိန်းကြေညာခဲ့သည်။ Rizzo အလုပ်အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများတွင်ပိုမိုထက် 20 နှစ်ပေါင်းအတူ Artel ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။
Artel ဝင်ရောက်မတိုင်မီက Rizzo လယ်ပိုင်းအရွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိက CEO ဖြစ်သူထောက်ခံမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများ, ခေါင်းဆောင်မှုဆက်ခံ, M & တစ်ဦးကအကြံပေး, ကော်ပိုရိတ်မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, နိုင်ငံတကာချဲ့ထွင်ခြင်း, ESOP အကူးအပြောင်းမှသေးငယ်တဲ့အဘို့အမဟာဗျူဟာမြောက်အတိုင်ပင်ခံဖြစ်သည်။ တိုင်ပင်ခြင်းမပြုမီ, Rizzo Cylon စွမ်းအင်၏မြောက်အမေရိကယူနစ်၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကမြောက်အမေရိကဥက္ကဋ္ဌနှင့်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအဖြစ်အများဆုံးမကြာသေးမီက, Schleuniger Inc ကိုမှာ 18 နှစ်ပေါင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ယခင်ကအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ Schleuniger ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သည်။
"ဒီ Artel ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရန်အတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်ပါပဲ" ဟု Rizzo ကဆိုသည်။ "ဆက်သွယ်ရေးအထူးကုသမှုများ Inc ကိုအစုစု၏မကြာသေးမီကဝယ်ယူနှင့်အတူပေါင်းစပ်အဆိုပါထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ယင်း၏ထူထောင်ခေါင်းဆောင်မှု, နှင့်အတူ, Artel ကြီးထွားမှုအတွက်ရစေတယ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်၎င်း၏ပူဇော်သက္ကာကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။ ငါ Artel ရဲ့ဝန်ထမ်း-ပိုင်ရှင်များအတွက်ဝင်ငွေနှင့်ရှယ်ယာတန်ဖိုးသိသိသာသာကြီးထွားအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ငါ့အတှေ့အကွုံမြားကို အသုံးပြု. မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
"ကျနော်တို့အလုပ်အမှုဆောင်ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့က Mike ထည့်သွင်းခံရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ကျနော်တို့လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးတက်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်မျှော်လင့်ဆက်လက်အဖြစ် High-performing ကုမ္ပဏီများမှ running အတွက်ဝန်ထမ်းပိုင်ကုမ္ပဏီများနှင့်သက်သေအောင်မြင်မှုနှင့်အတူသူ၏အတှေ့အကွုံမြား Artel ဖို့အရေးပါဖြစ်ပါတယ် "ဟုရစ်ချတ် Dellacanonica, ဘုတ်အဖွဲ့ Artel ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲနေသောနှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပြီး, အောင်မြင်မှု၏မိုက်ရဲ့သမိုင်းနှင့်အတူအလုပ်အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရှိခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လက်အောင်မြင်မှုသေချာအတွက်အရေးကြီးဖြစ်၏။ "
Dellacanonica တက်ကြွစွာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အရောင်းစစ်ဆင်ရေး၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် Artel တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.artel.com.
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ IP ကိုတိုက်ရိုက်ဖိုင်ဘာအဘို့အထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးမီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဝန်ထမ်းပိုင်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်တယ်, optical network များနိုင်ခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးကရှေ့ဆောင်, Artel ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ပါကဗီဒီယို-over-ဖိုင်ဘာကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ Artel ရဲ့ DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းအပါအဝင်အစုစုကို, DigiLink-Lite ကို, Fiberlink (R), Copperlink (TM), Scan ကို Do (R) နှင့် Deuce (R) ထုတ်ကုန်လိုင်းများ, အထိရောက်ဆုံးပေးပါသည်, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, configure လုပ်ဖို့အလွယ်ဆုံးနဲ့ထောက်ခံမှု မီဒီယာစျေးကွက်အပေါ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းနည်းများ။ များထားရှိထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်အတူ, Artel ထုတ်ကုန်အရေးပါဗီဒီယိုနှင့်ဒေတာများကမ္ဘာ့အများဆုံးကြည့်ရှုအားကစား, သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ရပ်များကိုထောကျပံ့ဖို့ feeds မစ်ရှင်များအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လွှင့်, ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့် CATV အော်ပရေတာများကနေ့တိုင်းအပျေါမှီခိုနေကြသည်။ Artel JPEG, 2000 (J2K) အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ၏ Standardization နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အလုပျအတှကျရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ (NATAS) ၏အမျိုးသားအကယ်ဒမီကနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာသူဟာ Emmy (R) ဆုချီးမြှင့်နှင့်အတူဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.artel.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Artel/Artel-MikeRizzo.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: သူ Mike Rizzo, သမ္မတ, Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
Artel ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ သူ Mike Rizzo တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-05-30
ယခင်: Dejero တိုက်ရိုက် + NewsBook ဆော့ဝဲ BGAN ဂြိုဟ်တု Terminator ကိုသုံးပြီးဗီဒီယို uplink Enable မှနောက်ဆုံးရေးသားချိန်
နောက်တစ်ခု: နယူး Reseller မဟာဗျူဟာနှင့်အတူအာရှပစိဖိတ်ဒေသကြီးအတွင်းရှိ Expand မှ Forscene သတ်မှတ်မည်